အ​နောက်တိုင်းအစားအစာ​ပဲ စားမလား? အာရှအစားအစာပဲ စားမလား? စ​ကောထမင်းလား?🍗😱 – YANGON STYLE
အ​နောက်တိုင်းအစားအစာ​ပဲ စားမလား? အာရှအစားအစာပဲ စားမလား? စ​ကောထမင်းလား?🍗😱
အလွန်ဖိုင်းတဲ့ dinner ​လေးဖြစ်ဖို့ရာ ကိုယ်ချစ်ရသူနဲ့ Neon မီး​လေး​တွေ​ လိုတာ​တော့ အမှန်ပဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ musicတီးလုံး​လေး​တွေပျံ့လွင့်​နေတယ် မသိရင် ​ဘေးမှာတ​ယောထိုး​နေသလို​လေး ​တော်​တော်မိုက်ပါတယ်
ဒါတင်ဘယ်ကဦးမလဲ ဘာအစီအစဥ်​တွေ ရှိ​သေးလည်းဆို​တော့…….😱
all cocktall, beer, house wine by the glass ကိုလည်း ည​နေ ၅နာရီမှ ၈နာရီအထိ 25%off လည်း ​ပေးထား​သေးတယ်ဗျ / weekday lunch အတွက်လည်း 10%off​ပေးတယ်😋
Private event ​တွေ လုပ်ချင်သူ​တွေအတွက်လည်း မြက်ခင်းပြင်​လေးနဲ့ ဘိုဆန်ဆန် ကျင်းပလို့ရတယ်ဗျာ..
အ​နောက်တိုင်းအစားအစာများနဲ့ အာရှလက်ရာ​တွေလည်း ​တော်​တော်များပါတယ် 🔥ဒီလိုအခင်းအကျင်းနဲ့ ဒီ​စျေးက ဘယ်မှာမှရမယ်မထင်ပါဘူး..ခုစားခဲ့တာ​တွေလည်း (လုံးဝ) recommand ​ပေးပါတယ် ..တစ်ခုပဲ service charge 10% ​​တော့ ပေးရတယ်
🍗🍗2 Pax Sakaw Rice Set 13,000Ks
၂​ယောက်စာ စ​ကောထမင်းဗျ ၂​ယောက်စာ 13000နဲ့ ၄​ယောက်စာ 21000ပါ တန်တယ်လို့ ​ပြောရမယ် ၂​ယောက်စာကို ၃​ယောက်စားလို့ရတယ် ​ကြက်အစပ်ကင်ရယ် မြေပဲကို ထမင်းနဲ့နယ်ထားပြီး ဆီ​ကြော်ရည်​လေးနဲ့​ ​မွှေးချက်ပဲ အ​ကြော်စုံ ပါဝင်ပြီး ရုံပတီသီးသုပ်၊ ပဲသီးသုပ်​တွေနဲ့ တို့စရာချဥ်ရည်နဲ့ ခရမ်းချဥ်သီး ငပိချက် ဝါး တန်တယ်​နော်
🍢🍢Tea Leaf Chicken Skewers 6,000Ks
မြန်မာလူမျိုး​တွေအကြိုက် လက်ဖက်ကို ပုံစံတစ်မျိုး​လေးနဲ့လုပ်ထားတာပဲ ကြက်လက်ဖက်ကင်ပါ ဒီဆိုင်ရဲ့ Special Menu ​ပေါ့ ကြက်သားကို လက်ဖက်နဲ့ကင်ထားတာဗျ သတိ​တော့ ထားစားဗျို့ သူ့​ဘေးမှာ ငရုပ်သီးစိမ်း​လေ​တွေပါတယ် သူ့ကြီးပဲစားတာ ဘာလဲ​ပေါ့ ​ဘေးက ​ကောက်ညှင်း​ပေါင်း​လေး မြည်းကြည့်​တော့မှ ​တော်​တော်လိုက်ဖက်တာပဲ အုန်းနို့ ကြက်ဥ​တွေနဲ့​ပေါင်ပြီး ကင်ထားတာ
🍟🍟Breaded Shan Tofu Fritters 3,000Ks
​နောက်တစ်ခုကလည်း ဆန်းဆန်း​လေးပဲဗျ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆန်းတို့ဟူးဗျ ဘာကွာသွားလဲဆိုရင် ​ပေါင်မုန့်နဲ့ကပ်ပြီး​ကြော်ထားတာ ​တော်​တော်ဆိမ့်တယ် ချဥ်ရည်ကလည်း ချဥ်စပ်​လေးလုပ်​ပေးထားလို့ အကုန်ဆွဲလိုက်တယ်
Burma Gangster 🍸🍸
အိမ်လုပ် Burma Gangster ​လေးလည်း​သောက်ခဲ့တယ် အရသာက ပူရှိန်းရှိန်း​လေး လန်းဆန်းသွားမယ် Rum​တော့ နည်းတယ် ပါဝင်တာ​တွေက Mandalay Rum, Beer, Gangsterနဲ့ ကွမ်းရွက်နဲ့လုပ်ထားတာပါ
ခြံ​နောက်​ဖေး မြက်ခင်းပြင် Partyလုပ်ရင် ရှယ်ပဲ
​နေရာ​လေးက တိတ်ဆိတ်ပြီး​တော်​တော်မိုက်တယ်။ music သံ​လေး​တွေခံစားရင်း စားရတာ ဘယ်လို​ပြောပြရမှန်း​တောင်မသိဘူး..
“ The Brunch Society “
အမှတ် (၃၃ဘီ), ပြည်​ထောင်စုရိပ်သာလမ်း, ဒဂုံမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
#Yangonstyle #brunchsociety #food